Nri Peruvian m - nri Peruvian m
Nri Peruvian m
Peru bụ mba nke South America gụnyere nnukwu akụkụ nke oke ọhịa Amazon ma nwee otu n'ime obodo Inca kacha ochie n'ebe dị elu. Nwanyị Andes. Na mgbakwunye, ọ bụ onye nwe Ndagwurugwu Dị Nsọ, okporo ụzọ Inca sitere na puku afọ gara aga, ọrụ aka ndị a ma ama na akụ ndị ọchịchị na ebe nchekwa ihe ochie kachasị na kọntinent ahụ na-eme ka amara omenala, ọdịnala na akụkọ ihe mere eme ha dị mkpa.
N'otu aka ahụ, ókèala a bụ onye okike na onye bu ya ụzọ nke otu n'ime nri kacha mma n'ụwa, nke na-ekwu okwu ma na-ejikọta ya na ekpomeekpo na ụdị ha pụrụ iche e ji mara obodo ha, mmetụta ịhụnanya na nraranye nke ndị ntụgharị okwu ha na ọtụtụ puku ohere ịnweta ọnụnọ na ya. Peru na isi na aru ọ bụla.
Nke a gastronomy bụ set nke efere na ihe ọṅụṅụ pụrụ iche Peru nke bụ akụkụ nke ndụ nkịtị na ọdịnala nke ndị bi na ya, ihe si na njikọ nke omenala culinary nke obodo ochie na European gastronomy na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na nke nta nke nta na-ejikọta ya.
Ntụziaka maka stew ọkụkọ na poteto na tomato uhie
Chicken bụ otu n'ime ihe ndị na-esi na ọtụtụ efere nke gastronomy Peruvian, nke ...
Ezi Adobo Ntụziaka
Ị nwere ike ichetụ n'echiche nri bara ụba, dị nro na nke na-atọ ụtọ? Ọ bụrụ otu a, anụ ezi Adobo ga-abụ nhọrọ kacha mma. Ma maka...
Chicken Sillao bụ ihe nnọchianya kachasị ukwuu nke ntinye aka nke nri ndị China na-enye na akwụkwọ nri na ...
Ofe ruo nkeji
Ofe a la minuta bụ ofe a na-eme n'ụlọ adịghị ọnụ, dị mfe ma dịkwa ngwa ijikwa ya, nke usoro ya bụ ...
ọkụkọ e ji esi nri
Chicken Escabeche bụ nri a na-ahụkarị nke gastronomy Peruvian, nke rutere n'ikpere mmiri ya site na ...
Red tagliatelle uzommeputa
Akụkọ ihe mere eme nke efere noodle na-acha uhie uhie na-egosipụta n'etiti afọ 1840 na 1880 mgbe nnukwu ego ...
ihe ijuanya nri ụtụtụ maka ụmụaka
Oge ọ bụla bụ ohere dị ukwuu iji nye nri ụtụtụ dị ịtụnanya, ma karịa mgbe a na-eduzi nri a dị ụtọ ...
Carapulca na ofe akọrọ
Carapulca nwere ofe akọrọ bụ efere Peruvian nke, dị ka akụkọ ihe mere eme nke ọtụtụ ndị edemede na ndị nyocha gastronomic si kwuo, bụ ...
Patrashca nke oke ohia
Patrashca nke ọhịa bụ nri sitere na ndị Aborigine na ndị bi na Peru tupu…
Agaghị ama ebe ceviche sitere n'ezie, ebe ọ bụ efere na-arụrịta ụka dị ka nke ya nke ọtụtụ mba…
N'otu oge ahụ, ụdị nri a bụ otu n'ime Nke kachasị mkpa n'ụwa na ihe atụ nke a bụ nri fusion n'ihi na ya ogologo multicultural akụkọ ihe mere eme, nke dabeere na ngwakọta nke isi ihe ọmụma nke oge ochie Peru na Hispanic nri na ya ike variant, Andalusian ọnụnọ na onyinye nke Atlantic n'ụsọ oké osimiri nke sub-Saharan Africa nke ndị ohu mgbe nchoputa nke. mpaghara ahụ mere.
N'ụwa, nri mbụ nke Peru bụ ihe dị iche iche dị iche iche, ebe ekele maka akwụkwọ ahụ "57 dị njikere ịghọta otú anyị si bụrụ ndị Peruvian" a na-agụta ruo 491-ahụkarị efere. N'akụkụ ụsọ oké osimiri Peruvian e nwere 2500 ụdị ofe dị iche iche, yana ihe karịrị 250 desserts ọdịnala na ihe ọṅụṅụ 70 sitere n'okike yana nkwadebe mmanya. Mana, ị ga-eche ihe kpatara oke efere ndị a ji dịrị? Na azịza ya bụ ekele ọdịdị ala pụrụ iche nke obodo ahụ site n'aka ruo n'aka ngwakọta omenala na mmegharị nke ndị ọkà mmụta oge ochie ndị ọzọ na nri ọgbara ọhụrụ.
Efere ọ bụla nwere siri ụtọ, ụfọdụ ndị ọzọ jikọtara na ngalaba ebe e kere ha, dị ka uto nke Mar, nnu si n'ụsọ osimiri na ọbụna agba na-esi ísì ụtọ nke ihe ọ bụla nke anwụ na-egbuke egbuke na-ekpuchi. N'okwu nke ugwu, oyi na obere ufiop flavors ụtọ soro okooko osisi, epupụta na ndị ọzọ mmiri na-na-na-naghachi na ịdị ọhụrụ na ịdị jụụ nke okike. Na kama, na nke ya etiti mpaghara, nke bụ nke gbara ya gburugburu ụlọ, omenala mmegharị na a ọzọ ecliptical gburugburu ebe obibi, nri na. ikuku ọdịnihu na-enweghị atụ dazzles na textures, esemokwu na ọbụna mgbagwoju na shapes na agba.
Otú ọ dị, ihe a nile adịghị anya na-enwe ike detụ ire, ebe ọ bụ na mba ọzọ mgbasa ozi na-enye ohere mara ma rie nri omenala na nke mba ina n'ime na n'èzí nke Peru dị iche iche alaka ma ọ bụ mba ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nke na-enye ohere obodo, ọbịa na ndị mba ọzọ, nụrụ ụtọ, mara na-echeta ebube ekpomeekpo nke a oké ala.
N'otu ụzọ ahụ, ibe ozi, mgbasa ozi na netwọk mmekọrịta, yana audiovisual ihe dị na netwọk na ọha dijitalụ ọkọlọtọ na-adị mgbe niile na-egosi nkwadebe na ịdọ aka ná ntị na ihe niile nwere ike ịmepụta ga-abụ ihe ngọpụ dị mkpa iji na-eleta ha na-aga n'ihu na-emepụta.
N'okwu a na ka ị nweta ụzọ ị ga-esi nwee mmasị, kwadebe ma kesaa efere ndị a, ihe ọṅụṅụ, desserts, ofe, akọrọ. Mmanya na ịma jijiji, nri myperuvian na-enye gị nnukwu uzommeputa ndepụta, Nkwadebe na egosi nke mere na ị nwere ike nụrụ ụtọ delicacy na exquisiteness na flavors nke Peru nweta maka gị.
Nke a bụ a ibe weebụ pụrụ iche na ngosi nke obosara na akwụkwọ ikike dị iche iche Ezi ntụziaka, ha niile ahaziri nke ọma ka ị ghara ịbụ onye na-esi nri dị ukwuu iji ruo ọkwa igbu ndị na-ewu ewu chefs. Peru. Otú ọ dị, banye n'ime ntakịrị n'ime ederede a wee chọpụta nhọrọ na uru dị na ya nri myperuvian ị ga-eru
Dị ka a kụziiri na mbụ, nri myperuvian dị ka a online interface jupụta na otutu nkwadebe nri ndị emblematic, omenala na ndị a ma ama nke Peru; yana nri eccentric ahụ, obi ike, oge ochie, nke ọgbara ọhụrụ na ọbụna nri nke oge a nke obodo ahụ dum nyere anyị na nke ọtụtụ ndị etolitela na-atọ anyị ụtọ na ịma jijiji ugbu a.
Ibe a nwere igwe nchọta nke nwere nnukwu katalọgụ ọdịnaya. N'okwu a, a ga-ahụ ya nkwadebe, Ezi ntụziaka, nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka, yana akụkọ dị nkenke nke akụkọ ihe mere eme na ụfọdụ ihe na-achọsi ike nke efere dị iche iche nke a na-ekesa dịka ebe nkwadebe na omenala si dị.
N'ụzọ dị otú a, ndị ọdịnaya ibe na nkesa ya:
Na mgbakwunye, ọ na-enye igwe nchọta nkeonwe ebe ị nwere ike ịbanye ịchọ ahịrị dị iche iche n'ụdị kichin ndị a:
Nke a bụ ụdị kichin na nso nso a Peru ebe ọ na-ewe Ezi ntụziaka si prehispanic gara aga imeghari ha, na-anapụta na itule ihe eji eme obodo. Nri ndị obodo dị ka tarwi, chuño, quinoa, kiwicha, moray, cochayuyo, maca, coca na ọgazị bịa.
Mbata na ọpụpụ Sino-Cantonese
Na ụdị nri a, search engine na-atụba ndị niile efere ebe osikapa bụrụ enyi ma ọ bụ n'ezie, bụrụ isi ihe. Daalụ nke Mbata na ọpụpụ Chinese Cantonese, ihe ụtọ na-esi na Eshia jikọtara ọnụ wee mee ka ntụziaka ndị ọzọ na-egosi n'ime ibe weebụ dị ka kpam kpam site na Peru ma na mgbọrọgwụ na ntinye aka site na mba ndị ọzọ na obere ọnụ ọgụgụ.
Akụ na ụba nke azu na anụ ọhịa nke Peru, ha buru ibu, n'ihi ya, nri emewo ka ndị a eke akụ. N'ime ụdị a bụ ụdị chupe, dị ka ceviche, chalaca-style mussels, tiradios na seco.
Nri Creole nwere dị ka oge mbụ ya XIX narị afọ na ọ bụ ụdị dị iche iche nke obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri n'oge Viceroyalty nke Peru. Ebe a na-ekpughe niile nri n'etiti narị afọ XNUMX na nke XNUMX tinyere usoro, akụkọ ihe mere eme na arịa pụrụ iche.
Na nke a elu nke mba, dị ka bụ Andes, nri dabeere na poteto, ọka na akwụkwọ nri aka na iwebata osikapa, achịcha na pasta na anụ dị ka lama, alpaca na anụ ọhịa. Dabere na ihe ndị a bụ na a na-emepụta ntụziaka ndị ibe na-atụba ndị na-azụ ahịa
Site n'ime ọhịa
niile nri na mgbakwasa, sauces na mmiri mmiri Ọ dabara na efere nke oke ọhịa, nke na-eso akọrọ na akwụkwọ nri esiri esi nri ma ọ bụ na-enweghị nkenke.
Na nhọrọ a tinye dị iche iche mmanya na mmanya na-aba n'anya. Yana nkwadebe niile na-agụnye ihe siri ike na mmanya ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ fermented.
Efrata iji nweta
N'ime ibe ị nwere ike ịchọ ntụziaka gị dabere na isi ihe eji eme ihe iji, nke ga-egosipụta ihe niile usoro dịnụ nke ngwaahịa kpakpando a.
Ndị ahụ ihe kacha achọ ma jiri ya mee ihe A na-egosi ya n'oge na-adịghị anya, yabụ ị nwere echiche nke ihe ị ga-achọ, na-eme ka ihe a na-ejikarị eme ihe maka nkwadebe Peruvian.
Mkpụrụ osisi kpọrọ nkụ
Azụ, shellfish na crustaceans
ezi ezi ma ọ bụ ezi ezi
Nri niile sitere na Peru bụ dị nnọọ mkpa maka obodo na mba ụwa, ma ọ bụ n'ihi akụkọ ihe mere eme ya, akara ngosi ma ọ bụ naanị n'ihi ụtọ pụrụ iche na enweghị atụ.
Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ efere ndị na-esiwanye ike maka ịbụ ihe nketa na omenala obodo. A na-ahụ ụfọdụ n'ime ndị a mikpuru n'ime nri myperuvian ma a kọwara ha n’ime ndidi na n’oge; aha ha bụ nke a:
anụ ọkụkọ osikapa
Purple na quinoa porridge
ọka chicha odo odo
Kedu ihe bụ ntụziaka njin ọchụchọ maka?
nri myperuvian nwere akwụkwọ nri nwere ihe karịrị 100 usoro ekesara dị ka ụdị efere ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-ebufe. Nke a na nzube nke ọha na eze ebube nke Peruvian nri, ya delicacy, ekpomeekpo, agbanwe agbanwe, esi ísì na udidi, nke na-enye ndị obodo na ndị ọbịa ohere. nyochaa akụkọ ihe mere eme ya na ọdịnala ya n'otu ihe ngosi.
N'otu aka ahụ, nke a bụ webụsaịtị nke ebumnobi ya bụ inye onye nyocha ọ bụla ohere kwadebe efere dị iche iche na ntụsara ahụ ebe ọ bụla ị nọ, na ihe ndị dị mfe na nke kachasị ụtọ na ọnụ ọgụgụ nke ịchọrọ, nke mere na ọ dịghị mkpa ịga ụlọ oriri na ọṅụṅụ na kagbuo ọnụ ahịa dị elu maka efere ihe atụ na nke dị umeala n'obi nke obodo Peru na-enye.
N'otu aka ahụ, ọ bụ ihe na-ajụ ndị ọbịa ya niile. nnukwu mfe Ezi ntụziaka nke na-adịghị ịkwesịrị ịbụ onye isi nri kacha nwee ahụmahụ ka imepụtaghachi ha. Naanị ihe dị mkpa na-amalite site na nkọwa dị mma na itinye uche mgbe ị na-esi nri, ihe niile na-emepụta ihe na àgwà dị mma mgbe ịmalite.
Ọ bụrụ na enwere ọchịchọ ịmepụta kọntaktị ọ bụla na ikpo okwu, nri myperuvian nwere a ụzọ kọntaktị dị mfe ma dị mma ka i wee kwupụta obi abụọ gị, nsogbu ma ọ bụ ọchịchọ gị nye ndị nlekọta na ndị njikwa nke webụ, nke n'ime oge ụfọdụ ga-aza arịrịọ gị ma ọ bụ ikike gị ka e wee dozie ọnụnọ gị na mkpa gị.
A na-egosi usoro a dị ka a ụdị nke a haziri dị ka ndị a:
aha: Nke a data dị mkpa iji nye gị a njirimara nye onye nwe arịrịọ ahụ, dị ka ọ ga-abụ ihe a chọrọ iji zoo aka na onye ahụ ma ọ bụrụ na ọ zaghachi ma ọ bụ kpọọ maka nlebara anya.
Ozi kọmputa: Ndị nwe ibe ha ga-ezitere azịza ya na email gị, ya mere adreesị a ji dị mkpa
Isiokwu: Nke a bụ ebe a ga-ekenye gị a isiokwu ma ọ bụ arụmụka na ozi. O nwere obere oghere ya mere nkọwa ahụ ga-adị mkpụmkpụ na nke ziri ezi
ozi: N'ebe a ị nwere ike gwa nsogbu ọ bụla ma ọ bụ mkpa ọ bụla ịchọrọ itinye aka na ya. nwere a Nnukwu ohere ebe ị nwere ike iji nkasi obi na nnwere onwe kwupụta ihe niile na-ewute anyị. Ma ka o sina dị, a na-atụ aro ka ọ bụrụ kpọmkwem na nkọwa na nsogbu ma ọ bụ ajụjụ
Ezi ntụziaka nri Peruvian kacha mma